ल्याटिन अमेरिका को जनसंख्या: आकार र संरचना
ल्याटिन अमेरिका 30 भन्दा बढी देशहरूमा र विदेशी क्षेत्रहरूमा पनि समावेश छ। तिनीहरूलाई के एकतामा बाँध्ने? के ल्याटिन अमेरिका को जनसंख्या characterizes?
यो क्षेत्र के हो?
उत्तर र - अमेरिका संसारको दुई महादेशमा समावेश जो विश्व, एक भाग हो दक्षिण अमेरिका। तर, सांस्कृतिक र सामाजिक विशेषताहरु आधारित यस्तो विभाजन पर्याप्त छैन। सम्पूर्ण दक्षिणी महादेशमा, मेक्सिको र क्यारेबियन एक साधारण नाम र ल्याटिन अमेरिका साझेदारी गर्नुहोस्।
पहिले, क्षेत्र Indoamerikoy वा Iberoamerica भनिन्थ्यो। यसको सबै देशहरूमा ल्याटिन मूल को आधिकारिक भाषाहरू (फ्रान्सेली, पोर्चुगिज, स्पेनिस) छन्। ल्याटिन अमेरिका को संरचना क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका (पोर्टो रिको) र फ्रान्स स्वामित्वको (मार्टीनिक, ग्वाडेलोप, र यति मा। डी) समावेश छन्। कहिलेकाहीं यो क्यानाडा, क्युबेक विशेष गरी प्रान्त समावेश, फ्रान्सेली मा कुराकानी गर्ने अधिकांश मानिसहरू।
क्षेत्र मूल romanogovoryaschimi यूरोप भन्दा बढी Inhabited थियो। तसर्थ, कुरा गर्न यी देशहरूको समुदाय पनि अधिक 1830 मा भएका छन्। विचार पछि नीति र स्थानीय बुद्धिजीवियों छानिएन थियो, र पहिलो पटक 1856-एम मा unifying अवधि सुनिन्थ्यो।
ल्याटिन अमेरिका को जनसंख्या: विकास इतिहास
पहिलो मानिस बारे 17-11 हजार वर्ष पहिले देखियो। को आदिवासी जनसंख्या केन्द्रीय-स्थानीय दक्षिण अमेरिकी दौड मा समावेश गरिएको छ। यो Amazonian, क्यालिफोर्नियाली, मध्य अमेरिकी, Patagonian, Andean र भारतीय जनसंख्या ognezemelskuyu शामिल। वैज्ञानिकहरू यी मानिसहरू तथाकथित Bering पुल मा क्लिक गरेर एशिया बाट यहाँ आइपुगे भन्ने अन्दाज लगाउनु।
यूरोप लागि xvi शताब्दीमा पूर्ण-मात्रा भूमि विस्तार तैनाथ गरेको स्पेनको क्षेत्रमा खोज। फलस्वरूप, ल्याटिन अमेरिका को आदिवासी मान्छे exterminated थिए। यस महादेशमा तिनीहरूसँग अफ्रिकी दासहरू ल्याउन, को पोर्चुगिज, ब्रिटिश, जर्मन, डच आए। को XIX शताब्दीमा भारत र चीन देखि कार्यकर्ता आइपुगे। एकै समयमा क्षेत्र gypsies आए, अरब, एशियाई, यहूदीहरूले। धेरै मिश्रित विवाह mestizos, mulattos, स्याम्बो को उद्भव गर्न नेतृत्व गरेका छन्। हाल, ल्याटिन अमेरिका सबैभन्दा रंगीन र अद्वितीय जातीय र आनुवंशिक रहनसहन छ।
संख्या र नियुक्ति
क्षेत्र वसोवास संख्या स्वतन्त्रता लागि स्थानीय युद्ध को समापन पछि एकदम वृद्धि गर्न सुरु गर्नुहोस्। हालैका वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति मात्र जारी छ। ल्याटिन अमेरिका बारेमा छ सय मिलियन मानिसहरूको जनसंख्या छ। सबैभन्दा आबादी देशहरूमा ब्राजील (200 मिलियन), मेक्सिको (120 मिलियन), अर्जेन्टिना (41 लाख) र कोलम्बिया (47m) छन्।
जनसंख्याको घनत्व ल्याटिन अमेरिका को वर्ग किलोमिटर प्रति 31 मान्छे छ। Uruguay र अर्जेन्टिनामा - सबै भन्दा ठूलो वृद्धि बासिन्दा डोमिनिकन गणतन्त्र मा मनाइन्छ, सबै भन्दा कम सूचकांक। 30-35 पीपीएम को क्षेत्र मा औसत जन्म दर, ल्याटिन अमेरिका को जनसंख्या धन्यवाद अवकाश उमेर मानिसहरूलाई मात्र 8% र 15 वर्ष उमेर मुनिका जनसंख्याको 40% छन्।
हरेक वर्ष नागरिकहरु को संख्या कम्तिमा 5% वृद्धि भएको छ। थप सय वर्ष पहिले, ग्रामीण जनसंख्या एकदम अब शहर Hispanics को बारेमा 80% घर छ प्रभुत्व छ। सय तीन भन्दा बढी शहर 1,00,000 मानिसहरू वा थप (मेक्सिको सिटी, रियो दि जेनेरियो, साओ पाउलो, आदि) को जनसंख्या छ।
सबैभन्दा देशहरूमा, जनसंख्या compactly राख्नुभयो। मेक्सिको र दक्षिण अमेरिकी महादेशमा केही राज्य अमेरिका मा, जनसंख्याको थोक पहाडी क्षेत्रमा बसोबास। एक intermountain क्षेत्र सबैभन्दा घनी आबादी (प्रति वर्ग। किमी 100 मान्छे।) विचार।
जातीय संगठन र धर्म
सबै देशहरूमा विभिन्न र अत्यधिक चर Latinos को जातीय विविधता। मूल इंडियन्स - छैन 15% भन्दा करिब आधा कुल जनसंख्या, तिनीहरूले पेरु, बोलिभिया, इक्वेडर, ग्वाटेमाला र दक्षिणी मेक्सिकोमा बनेको छ। Metises एक विशाल साझेदारी (50%) कब्जा। मेक्सिकोमा, उदाहरणका लागि, यो तिनीहरूलाई लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या पर्छ।
सेतो चमड़ी मान्छे साधारण हो अर्जेन्टिना, कोस्टा रिका र Uruguay मा। क्षेत्र मा कुल जो को वहाँ 20% भन्दा छैनन्। ब्राजील मा, डोमिनिकन गणतन्त्र र एशियाई बसाबास गर्नु गुयाना, त्रिनिदाद र टोबागो Negros र mulattos, प्रभुत्व छ।
औसत ल्याटिनो सामान्यतया दुई भन्दा बढी जात को जीन छ देखि यी सबै संख्याले, ससर्त छन्। ल्याटिन अमेरिका को जनसंख्या मुख्य रूप हो क्याथोलिक धर्म पालना, त्यहाँ प्रोटेस्टेंट छन्। हालै, नास्तिकता गर्न संक्रमण को झुकाव छ।
कलात्मक अभिव्यक्ति को माध्यम: साहित्य मा उदाहरण
वर्णन, सुविधाहरू, चरणमा र प्रकार: बिरुवाहरु को Pollination
7 ग्रेड मा कस्तो पाठ: को विषयों को एक संक्षिप्त सिंहावलोकन
Arachnids को प्रतिनिधिहरु, एक वर्ग विशेषता (फोटो)
ठोस: गुणहरू, संरचना, घनत्व र उदाहरण
को करेलियन बाम कसरी प्रयोग गर्ने। करेलियन बाम: मूल्यहरु
दर्शन र आफ्नो सुविधाहरू खण्डहरू
सांप र आफ्नो प्रतीक: टैटू मोल
सान्याटोरियम को सोलोटची (रियाजान): पर्यटकहरु को फोटो र समीक्षा
आय विवरण: यो के हो र यो छ जो?
'Ortofen' ट्याब्लेटको - किन, कहिले र कसरी?
हलो प्रकृति को एक ओप्टिकल घटना हो